Iiholide ezingenakulibaleka entliziyweni yePoschiavo
Ulibale uxinzelelo kunye namaxhala kwaye uchithe iiholide ezingalibalekiyo kwisakhiwo esidala sembali entliziyweni yePoschiavo. Igadi enkulu ikumema ukuba uhlale, ujabulele uxolo kunye nokuzola ngeglasi yewayini ngelixa abantwana bedlala kwigadi yoluntu.
Kwimizuzu embalwa yokuhamba ungangena kumbindi welali, apho i-gelateria kunye noLwesithathu (ehlotyeni) imarike yelali ikulindile. Zonke iivenkile kunye neeresityu, indawo yokuqubha kunye nesikhululo sikaloliwe e-Poschiavo sikumgama wokuhamba.
Igumbi lokulala elikhulu kunye negumbi lokulala labantwana elinebhedi enkulu kunye nebhedi eyongezelelweyo yomntwana ziyafumaneka kuwe. Ukuba unabantu abangaphezu kwe-4 okanye ungathanda ukuzisa abahlobo okanye amalungu osapho kunye nawe, siya kukulungiselela igumbi elongezelelweyo, eliqhagamshelwe kwigumbi lokuhlambela. Ukuba ufikelela kubantu aba-4 eli gumbi liza kuvalwa ukuze ube nemfihlo yakho. Isitovu somthi esiqhelekileyo sePuschlav sikuvumela ukuba uchithe iiyure ezipholileyo kwigumbi lokuhlala.
Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngomatshini wekofu (iDolce Gusto), umatshini wokuhlamba izitya kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko zasekhitshini. Isomisi seenwele, iWiFi, iTV kunye nendawo yokupaka kwindawo echaseneyo zibandakanyiwe kwixabiso.
Ifulethi kumgangatho we-2, inqwelomoya yokugqibela yezitepsi ingumnqantsa.
Ungalibazisi ukuqhagamshelana nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo.